हिलाम्मे सडक पार गर्दै बस, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हिलाम्मे सडक पार गर्दै बस
डिसी नेपाल , २९ चैत्र २०७४
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष मनसुनमा देशका विभिन्न भागमा पहिरो तथा बाढीले सताउने गर्छ । कतिपय ठाउँमा पहरोले स्थानीयको घरबारै बगाएर लानेगरेको उदाहरण हामीसँग ताजै छ ।
पहिरोले बाटघाटा पनि बगाएर लानेगरेको अनुभव पनि हामिले वर्षेनी भाग्ने गरेकै छौं । तर कतिपय स्थानमा चैतको सिमसिमे पानीले समेत दुख दिने गरेको छ ।
यस्तै उदाहरण हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका–३ खहरे नजिकको । यो स्थानमा अहिले नै असार-साउन जस्तै बाटो हिलाम्मे भएको छ जसका कारण यहाँ गुड्ने सवारीका साधनहरु मात्र नभई बाटो हिडने बटुवाहरु पनि त्यतीकै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
लोकमार्ग खुलेको २० वर्ष हुँदा पनि सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन । तस्वीर: रामबहादुर थापा, बागलुङ, रासस